Cubot KingKong 5 Pro dia mahatratra ny tsena espaniola amin'ny vidiny 121,62 euro | Androidsis
Manuel Ramirez | | Android Android, Finday
Raha miandry ny fotoana ahazoana finday vaovao amin'ny Android 11 sy bateria lehibe ianao dia afaka mandeha fahazoana ny Cubot KingKong 5 Pro amin'ny € 121,62 amin'ny tolotra manokana fandefasana.
Finday iray amin'ny faritra rehetra izay natao hiatrehana ny tontolo ratsy indrindra ary mandritra ny andro vitsivitsy, hatramin'ny 2 aprily, azonao atao izany satria mihena 44% amin'ny vidiny. Tapakila ho an'ny fitaovana izay mitondra tena lavorary ary manana izany Android 11 izany hankafizany ireo fiasa Android tsara indrindra.
1 Ny finday voalohany amin'ny faritra rehetra misy Android 11 lafo vidy
2 Ny famaritana ara-teknika anao
3 Tolotra 3 andro amin'ny 44%
Ny finday voalohany amin'ny faritra rehetra misy Android 11 lafo vidy
Ity Cubot KingKong 5 Pro ity, ary izay efa nolazainay anao momba azy tsy ela akory izay, azo dokaina tanteraka toy ny finday mora vidy voalohany miaraka amin'ny Android 11 Ary ireo € 121,62 ireo dia fakam-panahy izay sarotra ny milaza azy tsia, ary vao mainka aza rehefa fantatsika ny tohiny manokana.
Ary miresaka momba ny iray amin'ireo finday avy any Azia ireo izahay izay tsy dia misy endri-javatra ary dia gaga anay amin'ny fahafenoany. Manana bateria betsaka izahay izay mahatratra bateria 8.000mAh, mpandefa stereo roa ho an'ny feo tsara indrindra, fanoherana IP68 & IP69K amin'ny rano sy vovoka, ary combo fakan-tsary telo mba hanana sary azy ho iray amin'ireo fanovozan-kevitra ao.
Mazava ho azy fa miatrika finday miseho ho mahatohitra isika, ka ny famolavolana azy dia miara-miasa mba hahafahana miatrika ireo toerana sy tontolo iainana ireo izay ilantsika fitaovana mitazona ny azy manokana.
Ny famaritana ara-teknika anao
Araka ny efa nolazainay, ny Cubot KingKong 5 Pro dia manana bateria 8.000mAh, fanamafisam-peo stereo roa, IP 68 ary IP69K ho an'ny fanoherana ary kombo fakan-tsary telo heverina ho tena mampiavaka azy, saingy mbola betsaka ny zavatra tsy tokony hadinontsika.
Mikasika ny fahatsiarovana anatiny sy RAM, ny Cubot KingKong 5 Pro mahatratra 64GB ho an'ny voalohany ary 4GB ho an'ny faharoa. Ny efijery an'ity finday ity dia mahatratra 6 santimetatra miaraka amin'ny famahana HD (avelao isika tsy hanantena vahaolana avo lenta eto ary amin'ny toerana hafa dia misy ihany koa ny vidiny ...) ary fakan-tsary ho an'io anoloan'ny efijery io izay mijanona eo amin'ny 25MP ho an'ny solomaso izay miandraikitra selfie. ary antso an-tsary.
Zava-dehibe iray hafa manasongadina an'ity telefaona Cubot vaovao natomboka androany ity ny fakantsary triple misy a 48MP main lens, 5Mp ho an'ny makro makro, ary 0,3MP iray ho solomaso photosensitive.
Azontsika atao ihany koa ny mitanisa ireo ambiny amin'ireo toetra izay tsy dia manandanja loatra, fa amin'ny ankapobeny dia manampy lisitra tsara amin'izy ireo, toy ny izy ireo dia NFC, GPS, GLONASS, BEIDU ary Android 11 (Na dia mahaliana antsika aza ity iray ity). Izy io dia manana seranan-tsambo USB-type C, ny fahaizana manitatra ny memoara anatiny miaraka amin'ny micro-SD hatramin'ny 256GB, OTG, Face ID ary Bluetooth 5.0.
Ka amin'ny lafiny ankapobeny sy amin'ny vidiny atolotra amin'izao andro izao dia ny finday goavambe tsara indrindra amin'ny vidiny ambany azonao atao anio.
Tolotra 3 andro amin'ny 44%
Ny Cubot KingKong 5 Pro dia natomboka androany ary namidy tamin'ny fihenan'ny 44%, noho izany azonao atao ny mividy azy amin'ny vidiny manokana € 121,62, Ka raha nanangona vola ianao hiandry ny fandefasana telefaona an'ity karazana ity dia mety tonga ny fotoana handehananao amin'ny tolotra manokan'izy ireo amin'ny Aliexpress.
Tolotra manokana Cubot KingKong 5 Pro - Rohy mankany € 121,62
Ity vidiny ity dia misy amin'ny andro anio ihany hatramin'ny 2 aprily, avy eo hiverina amin'ny vidiny mahazatra ary mijanona amin'ny 217,19 euro ary tsy ratsy velively ny manisa ny mombamomba azy sy ny tanjony lehibe; ary tsy iza izany fa ny fanoherana ary azontsika atao ny mitondra ny Cubot mankany an-tendrombohitra, amoron-dranomasina na aiza na aiza no tadiavintsika nefa tsy matahotra isika sao hianjera sy ho lany ny heriny mandritra ny 2 andro ny bateria ary io geolocation io.
Finday iray izay Azontsika atao ny manome tsiny fa tsy manana maodely loko isan-karazany izy io, fa raha tsy izany dia lasa safidy manokana ho an'izay rehetra maniry ny hanao fanatanjahan-tena tafahoatra, ny asany dia mivezivezy amin'ny tontolo sarotra na te hanana finday faharoa fotsiny sao sanatria.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Android Android » Ny Cubot KingKong 5 Pro dia natomboka tamin'ny tolotra 3 andro tamin'ny 44% tamin'ny € 121,62
Xiaomi Mi 11: Fanadihadiana, toetra sy fisedrana fakan-tsary